कोरोना भ्रम भन्नेले दीर्घरोगीलाई समस्या थप्दै छन्
By administrator on	 September 8, 2020 अन्तरवार्ता, कोरोना अपडेट, फोटो फिचर, स्वास्थ्य/जीवनशैली/यौन
कोरोनाबाट कस्ता बिरामीको मृत्यु भइरहेको छ ?
कोभिड १९ का कारण चितवनका ११ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमध्ये धेरैजसोमा कुनै न कुनै प्रकारको दीर्घरोग देखिएको थियो । विशेष गरी फोक्सोको क्यान्सरको समस्या, सुगर र प्रेसरको समस्या, मुटुको समस्या तथा मृगौलाको समस्या भएका बिरामीहरुको मृत्यु भएको देखिन्छ ।
कुनै पनि समस्या नभएका व्यक्तिको पनि मृत्यु भएको छ ?
मृत्यु भएकामा ३÷४ जनामा भने यसअघि कुनै पनि समस्या भएको पाइएन । सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि उहाँहरुको मृत्युभएको छ । यसमध्ये एकजना पुरुष ज्वरो, खोकी र श्वासप्रश्वासको समस्या लिएर आउनुभएको थियो । उहाँको कोभिड परीक्षणबाट पुष्टि भयो । उहाँमा निमोनिया भएर, अवस्था कृटिकल रह्यो । पछि उहाँको निधन भयो । यस्तै अर्का एकजना ७८ वर्षका पुरुषमा पनि कुनै पनि दीर्घरोगसम्बन्धीसमस्या थिएन । उहाँलाई पनि बिस्तारै निमोनिया हुँदै गयो र पछि निधन भएको छ । सो मध्ये एकजनाको भरतपुर अस्पतालको इमर्जेन्सीमा उपचार गर्दागर्दै निधन भएको थियो । कोभिडले दीर्घरोगीहरुमा बढी जोखिम देखिन्छ । उहाँहरुमा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता पनि कम हुने भएकाले कोभिडबाट दीर्घरोगीहरुलाई बचाउनु सबैभन्दा आवश्यक छ । हरेक परिवारका सदस्यले यसतर्फ सोच्नु पर्दछ ।
भरतपुर अस्पतालमा बिरामीको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले भरतपुर अस्पतालमा सोमबार दिउँसोसम्म ९ जना आइसियुमा, ७ जनालाई पर्याप्त अक्सिजनमा, ९ जनाको अवस्था मध्यम खालको रहेको छ भने अहिले भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्न । आइसियुमा रहेका दुईजनाको अवस्था भने जटिल छ ।
सामाजिक सञ्जालमा कोरोना भ्रम हो भनेर भन्न थालिएको छ ? यो सत्य हो ?
कोरोना भ्रम मात्र हो भन्ने अज्ञानी हो । आँखाले देखेन भन्दैमा त्यो छैन भन्नु गलत हो । विज्ञानले छ भनेको अवस्थामा नमान्नु गलत हुन्छ । उहाँहरुकै भ्रमका कारणले आज बिरामी आइसियु र भेन्टिलेटरमा जानेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । दीर्घरोगीहरुमा समस्या बढ्दै गएको छ । घरको तन्नेरी दिनभरि केही होइन भनेर स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा नगरी डुल्छ । घरमा रहेका बाबुआमा र छोराछोरीको भविष्य उसले हेरेको छैन । उसलाई पछुताउनु सिवाय केही हुने वाला छैन । बेलैमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सचेत रहन आग्रह गर्दछु । अर्को कुरा कोरोना लाग्दैमा आत्तिनुपर्ने पनि अवस्था छैन । कोरोनालाई ठूलै मान्दा पनि कोरोना लागेका व्यक्तिलाई सामाजिक विभेद बढेको छ । यसलाई समान्यीकरण गर्नुपर्दछ । कोरोना केही होइन भनी स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड नअपनाउने पनि गर्नु हुँदैन । यसलाई हाउगुजी बनाएर समाज तर्साउनु पनि जरुरी छैन । पटक पटक हात धुने, मास्क लगाउने र भौतिक दूरी कायम गर्दै आफू पनि बाँच्ने र अरुलाई पनि बचाउनुनै अबको उत्तम विकल्प हो ।
( संवाददाता पवित्रा पराजुलीले सोमबार दिउँसो लिनुभएको अन्तर्वार्तामा आधारित )
विजय खबर २०७७ कार्तिक ०७ गते विहान
October 23, 2020 | 29 min 51 secs
विजय खबर २०७७ कार्तिक ०५ गते विहान
October 21, 2020 | 25 min0secs
वडादशैंको सातौं दिन आज घरघरमा फूलपाती भित्र्याइँदै
गैंडाकोट, कार्तिक ७ । आज वडादशैंको सातौं दिन । हिन्दू धर्मावलम्बीहरु परम्पराअनुसार घरघरमा फूलपाती भित्रयाउँदै…